AMISOM oo lagu qaaday weerar isqarxina - BBC News Somali
AMISOM oo lagu qaaday weerar isqarxina
9 Sebtembar 2010
Image caption dhaawac la sido
Shabab ayaa maanta weerar is qarxin ah ku qaadday garoonka dayaaradaha ee magaalada Muqdisho, laakiin weerarkaas waxaa dhicisiyay ciidanka AMISOM ee iridda kore waardiyaha ka hayay.
Qiyaastii labadii iyo 15 daqiiqo wakhtiga Muqdisho ayaa laba baabuur oo 5 nin oo hubeysani ay saaran yihiin waxay isku dayeen in ay difaaca airporka ay ka soo gudbaan. Gaariga kowaad ayaa lagu qarxiyay irrida Airport-ga.
Laba askari oo AMISOM ah ayaa halkaa ku dhintay. Saddex kalena wey ku dhaawacmeen. Gaariga labaad oo kaa ku daba dhowaa waa la is hor taagay mana qarxin.
Laba xiran suunka la isku qarxiyo, isla markaana ku labbisan dharka ciidanka Dowladda KMG-ka ah ayaa ka soo degey ayaga oo rasaas oodda ka qaaday. Orord ayay ku soo galeen airporka, inkasta oo iyagana ay ku socotay rasaasta AMISOM.
200 oo mitir marka ay u jiraan dhismaha airporka yaa la joojiyay, halkaas ayay isku qarxiyeen. Ugu yraan 1 qof oo rayid ah, oo u shaqeynayay sharikadda dayaaradaha African Express ayaa halkaa ku geeriyo.
Dhanka kale, Ururka Al Shabab ayaa sheegay in ay weerarkaasi ka dabeeyay uguna danlayeeyeen shir ay ka qeyb galiyeen dad ajnabi ah.